uDokotela "uphume phambili ecaleni lokuthumba" - Ilanga News
Home Izindaba uDokotela “uphume phambili ecaleni lokuthumba”
uDokotela “uphume phambili ecaleni lokuthumba”
UDKT Bongiwe Nungu ojabulela ukuphuma phambili ecaleni lokuthumba nokuzama ukubulala.
UKHALA ngokulahlekelwa yimali elinganiselwa ku-R1 million ngenxa yemibiko yokuboshwa kwakhe, ngezinsolo zokuthumba nokuzama ukubulala isisebenzi sakhe, udokotela wesifazane waseMgungundlovu eligcine limthethi-le icala eNkantolo yesiFunda yaseMgungundlovu.
UDkt Bongiwe Nungu we-Uminathi Medical Centre and Aesthe-tic Clinic, ukhala ngokudicileleka phansi kwegama lakhe ngesikhathi egqigqa enkantolo ngecala alivulelwa nguNkz Naledi Bhengu, owayeyi-receptionist eSurgery yakhe, ekuBoshoff Street, eMgu-ngundlovu.
Leli cala ligcine lichithiwe yimantshi, uNkk Jane Narain ngeledlule.
ILANGA langoMfumfu (October) nyakenye labika, ngoNkz Bhengu owayethuka izanya ngokwakume-hlele, ethi wayecindezelwe ngamadoda awu-5, emfake ishubhu ebusweni, elalimncisha umoya, kufunwa ibhuku likadokotela elalilahlekile.
Wathi nakuba uyaphefumula, wasizwa wukutholakala kwaleli bhuku, okwangena ucingo komu-nye walaba balisa, lusho ukuthi selitholakele ehhovisini lesinye isisebenzi.
UDkt Nungu uvumile ukuthi lalahleka ibhuku lakhe futhi wazivalela zonke izisebenzi ngaphakathi, eziphoqa ukuba zilifune zize zilithole ngoba libaluleke kakhulu njengoba wayelahlekelwe wu-R550 000 ngokulahleka kwalo.
“Lokhu kokuthi ngabiza amadoda ahamba noNaledi, kangikwazi ukuthi kuvelaphi. Nenkantolo ngayitshela ukuthi ukube ngangi-thumba izisebenzi, ngangingeke ngithumbe esisodwa.
“Kusukela kwabikwa ngecala engavulelwa lona, ngilahlekelwe yimali engafinyelela ku-R1 million ngoba abantu bese besaba ukuza e-surgery yami.
“Ngincisheke nethuba lokubhala ezinye izivivinyo zami ebezise-India nase-United Arab Emirates, ngoba bengiphuciwe amaphepha angigunyaza ukuphumela ngapha-ndle kwaseNingizimu Afrika,” kusho uDkt Nungu.
Ukhale ngetulo lokusetshenzi-swa kwezisebenzi zakhe ngaba-mfuna efile.
“Esinye sezisebenzi (asigagule ngegama), safika nenyanga emsebenzini ngangatshelwa ukuthi kuzokwenziwani. Laphaya e-surgery bese kuchelwa imini nobusuku mina ngingazi.
“Umndeni wami uhlukumezeke kakhulu ngemibiko yamaphepha-ndaba mayelana nokuthiwa
ngikwenzile ezisebenzini zami.
“Namhlanje ukhululekile negama lami ligezekile noma ngisahla-nganisa nabameli bami ukuthi yiziphi izinyathelo ezizothathelwa ukusebenza komthetho ngoba ku-khona ezinye izinto ezingamukelekile ebezenziwa ngamaphoyisa kimina ngesikhathi ngivalelwe esitokisini.
“Elinye langidelela lathi ngizo-gwetshwa izinyanga eziwu-7 ngoba ngiphakeme kakhulu nezingane zami zizohlupheka ziphume nase-zikoleni ezizimele,” kusho yena.
UNkk Samukelisiwe Nxumalo ongummeli kaDkt Nungu, ukuqini-sekisile kwiLANGA ukuchithwa kwamacala abethweswe ikilayenti lakhe.
Ukhale ngokuhlukunyezwa kwalo ngabengalo yomthetho ngesikhathi lihamba icala, okubalwa nokudelelwa nayiphoyisa lesilisa.
Okhulumela iNational Prosecution Authority (NPA) KwaZulu-Natal, uNkk Natasha Ramkisson, akatholakalanga ukuphawula, ucingo lwakhe belukhala lungene egunjini lemiyalezo azisa abezindaba ukuthi usekhefini, akatholakali.
Previous articleUgweme ukuziqhatha nePSL ngeChiefs
Next articleUmphakathi udinwe wavala isonto elisemhlabeni wenkosi